jeudi, 13 juin 2019 21:48
CNAPMAD: Nirehitra ny trano fitoeran’entana
Fitaovana maro toy ny kidoro spaonjy sy hazo no potiky ny afo, androany, mandram-pahatongan’ny mpamonjy voina teny Ankorondrano - Antananarivo misy ny foiben-toeran’ny CNAPMAD, izay orinasam-panjakana mpanamboatra fitaovam-pianarana sy fampianarana.
jeudi, 13 juin 2019 21:45
Fifidianana solombavambahoaka: 40,71% ny Taham-pandraisana anjara ankapobeny
Tao amin’ny Distrikan’i Beloha Androy no navitrika ny mpifidy: 63,93% ; tena nalaina kosa ny mpifidy tao Antananarivo IV: 18,41%.
40,71% ny Taham-pandraisana anjara ankapobeny nanerana ny Nosy tamin'iny fifidianana solombavambahoaka notanterahina ny Alatsinainy 27 mey 2019 iny.
jeudi, 13 juin 2019 21:40
Fifidianana depiote: 71 ireo fitoriana voarain’ny CENI
Fitarainana sy fitoriana voaray hatramin’ny androany tamin’ny 11 ora maraina, nanaovan’ny CENI tatitra tamin’ny mpanao gazety io 71 io.
Nilaza Rakotonarivo Thierry, filoha lefitry ny CENI, fa mbola raisina ireo fitoriana mifandraika amin’ny tsy fanarahan-dalàna mandritra ny fampielezan-kevitra sy ny andro fandatsaham-bato hatramin’ny sabotsy 15 jona, fotoana hamoahan’ny CENI ny voka-pifidianana feno vonjimaika tamin’ny fifidianana solombavambahoaka.
Ho an’ireo fitoriana sy fitarainana mikasika ny tsy fanekena ny voka-pifidianana kosa dia 48 ora aorian’ny famoahan’ny CENI ny voka-pifidianana feno vonjimaika no ahafahana mandray izany eny anivon’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC).
jeudi, 13 juin 2019 21:36
Fifidianana depiote: Ny Sabotsy 15 jona no hamoaka voka-pifidianana feno vonjimaika ny CENI
Asain’ny CENI Foibe hanatrika io famoahana voka-pifidianana feno vonjimaika io ireo solontenam-panjakana, ireo kandida nilatsaka hofidiana ho solombavambahoaka izay afaka, ny fiarahamonim-pirenena, ireo mpiaramiombon’antoka ary ny haino amanjery.
Nampahafantatra ny CENI androany fa aorian’ny famoahana ny voka-pifidianana tamin’iny fifidianana Solombavambahoaka farany teo iny dia miomana amin’ny fikarakarana ny fifidianana Ben’ny tanàna indray ny CENI.
Hisy avy hatrany aorian’ny famoahana voka-pifidianana ny fivoriamben’ireo birao maharitry ny CENI hamolavolana tetiandro sy tetibola mikasika izany.
jeudi, 13 juin 2019 21:22
Mpanaramaso fifidianana: 7 amin’ny 39 no nahatonga tatitra eny anivon’ny CENI
Nanambara ny CENI Foibe androany fa na dia tapitra ny 6 jona 2019 aza ny 10 andro omen’ny lalàna hanateran’ireo Mpanaramaso fifidianana, nahazo alalana avy amin’ny CENI tamin’iny fifidianana solombavambahoaka iny, hanaovana tatitra dia mbola mandray izany tatitra izany ny CENI.
jeudi, 13 juin 2019 20:59
Haiady fitaizam-batana: Roa taona izao no nidiran’ny “Aero-kick” teto Madagasikara
Maître Kelly Rasoanaivo no nampiditra ny “Aero-kick” teto Madagasikara. Haiady fitaizam-batana amin'ny alalan'ny mozika sy fihetsika “kick-boxing” ny “Aero-kick”, izay ao anatin'ny WAKA sy WAKO
Nosokafan’ny Aero-kick Rossary ho an'ny daholobe ny fiangaliana azy ity, tamin'ny 8 jona 2019 teo, mifanindran-dalana indrindra amin’ny fankalazana ny faha-25 taonan’ny Club Rossary, izay anasana ireo tia mitaiza vatana rehetra na lahy na vavy isaka ny Alatsinainy, Alarobia ary Zoma amin’ny ora isafidianana : 6h30-7h30 na 12h30-13h30 ary ny Sabotsy amin'ny 9h-10h ao amin'ny Dojo Rossary Mahamasina.
jeudi, 13 juin 2019 20:58
Mpiasa ECD: Enim-bolana tsy nahazo karama
Mitaraina ireo mpiasa ECD (Emploi de Courte Durée) amin’ny fanjakana, fa hananika ny enim-bolana izao raha tapitra ity volana jona ity, no tsy nahazo karama. Tsy misy fanazavana ny antony, fa dia mitaintain-dava izahay mpiasa ECD, indrindra manoloana ny filazana fa tsy maintsy hanadio tontolon'ny ECD ny Fajankana, hoy izy ireo.
“Tena mijaly ny ankabeazanay ECD”, hoy hatrany izy ireo, satria “tsy velomin-dray aman-dreny intsony ny betsaka aminay fa efa mamelom-bady aman-janaka daholo, nefa izahay miasa ary mitana andraikitra maro amin'ny asam-panjakana”.
LIVE HOTEL Andavamamba: Valan-dresaka nataon'ireo Kandida mivondrona
Tonga nametraka fitoriana teny amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana Ambohidahy ireo kandidà avy amin'ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) sy avy amin'ny tsy miankina maromaro, ka nitohy tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izany, izay natao tetsy amin'ny LIVE HOTEL Andavamamba.
Nisy arak'izany ny fanehoan'izy ireo ny porofo tany amin'izy ireo nilazany ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo kandida ho solombavambahoaka miara-dia aminy.
jeudi, 13 juin 2019 13:15
Fifidianana depiote: Fitanana an-tsoratra miisa 4 hatreto no hita fa tsy mitovy rehefa nampitahana
Fitanana an-tsoratra ny voka-pifidianana (PV) avy amin'ny birao fandatsaham-bato miisa 837, avy amin'ny Distrika miisa 23, hatreto no neken’ny CENI, ary efa vita fampitahana teny amin'ny foibeny eny Alarobia – Antananarivo, araka ny fampitam-baovao ny fiandohan’ny tolakandro teo.
Nahitana tsy fitoviana ny 4 tamin’ireo fitanana an-tsoratra ireo, ka 2 avy ao amin’ny Distrikan’i Soalala, 1 avy ao Arivonimamo, ary 1 avy ao Ambositra.
Nanipika mazava ny CENI fa « tsy afaka manova na manitsy ny voka-pifidianana ny CENI na misy na tsia ny tsy fitoviana, aorian’ny fampitahana ». Manao fitanana an-tsoratra iraisana kosa ny kandida sy ny CENI halefa any amin’ny HCC, momba izay hita nandritra ny fampitahana.
Nanambara ny CENI fa anio Alakamisy 13 jona no fe-potoana farany ahazoana manatanteraka fampitahana ireo Fitanana an-tsoratra eny amin'ny foiben-toerany Alarobia.
Anosibe – Antananarivo: Tapaka 20 min teo ny fifamoivoizana, nibahana ny sarety
Nobahanan’ireo sarety entin-tanana ny lalana tety Anosibe Tsena ny maraina teo, nanehoan’izy ireo ny tsy fankasitrahany ny fampiharana ny lalàna navoakan’ny Prefektiora ny famerana ny fotoana ahafahan’ny sarety sy posy mivezivezy eto Antananarivo Renivohitra.
Niditra an-tsehatra ny Polisy nandamina, dia nivaha ny sakana ary nisokatra ny làlana.